Manokatra ny habakabaka i Turkménistan ho an'ny sidina fialana ao Afghanistan
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Turkmenistan » Manokatra ny habakabaka i Turkménistan ho an'ny sidina fialana ao Afghanistan
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Turkmenistan • Vaovao isan-karazany
Amin'ity toe-javatra ity, manatanteraka ny adidiny iraisam-pirenena, ao anatin'izany ireo nipoitra avy amin'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny maha-olona, ​​i Turkmenistan dia hanome ny habakabaka ho an'ny kalesin'ireo olona ireo amin'ny alàlan'ny fiaramanidin'ny fanjakana vahiny.
Tamin'ny 15 Aogositra, niditra tao Kabul i Taliban ary nanangana fifehezana feno ny tanàna.
Ny firenena tandrefana dia mamindra ny teratany avy any Afghanistan.
Avelan'i Turkmenistan hamaky ny habakabaka iany ny sidina fialana any Afghanistan.
Ny birao fanaovan-gazety an'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny any Turkménistan dia namoaka fanambarana androany nanambara fa nanapa-kevitra ny governemanta Turkmenistan fa hanokatra ny habakabaka ho an'ny firenena hamindra ireo sidina manidina teratany vahiny avy any Afghanistan.
“Araka ny fantatra, nisy firenena sasany nanomboka namindra toerana ny olom-pireneny any Afghanistan. Amin'ity toe-javatra ity, manatanteraka ny fanoloran-tenany iraisam-pirenena, ao anatin'izany ireo izay mivoaka avy amin'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny maha-olona, Turkmenistan dia hanome ny habakabaka ho an'ny kalesin'ireto olona ireto amin'ny alàlan'ny fiaramanidina avy any ivelany, ”hoy ny fanambaran'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny.
Tamin'ny 15 Aogositra, niditra ny vondrona mpioko mahery fihetsika Taliban Kabul tsy nisy fanoherana ary nametraka fifehezana feno ny renivohitra Afghanistan ao anatin'ny ora maromaro. Nandositra ny firenena ny filohan'ny Afghanistan Ashraf Ghani, voalaza fa nitondra vola 169 tapitrisa $ ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana.
Nanomboka tamin'izay, ny filoha lefitry ny Afghanistan, Amrullah Saleh dia nanambara ny tenany ho filoham-pirenena mpiahy ny firenena, niantso ny fanoherana mitam-piadiana ny Taliban.
Ny firenena tandrefana dia mamindra ny teratany sy ny mpiasan'ny masoivoho.